Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku dhintay Weerar ka dhacay GEDO. – Shabakadda Amiirnuur
July 23, 2019 4:14 pm by admin Views: 45
Qaraxa maanta duhurkii ciidamo katirsan kuwa Itoobiya lagula eegtay meel u dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa laga helayaa faafahinno dheeri ah oo ku aadan khasaaraha.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo aan soo xiganeyno ayaa noo xaqiijiyay in khasaaraha gaaray ciidamada Itoobiya uu marayo dhimashada 10 askari, iyo burburka gaari nooca ciidamada xambaara ah oo ay saarnaayeen.
Askarta Itoobiyaanka ee la qarxiyay ayaa kasoo laabtay deegaanka Yurkud ee gobolka Baay iyo Bakool, halkaasoo dhawaan ay geeyeen sahay ciidan, waxaana la qarxiyay markii ay kasoo laabteen oo ay ku dhawaayeen degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Xarakada Al-Shabaab ayaa ciidamada Itoobiyaanka ku beegsanaya goobaha ay duulaanka kaga joogaan gobollada Soomaaliya, ciidamo Itoobiyaanka ayaana inta badan la kulma weeraro qaraxyo ah oo gallaafta noloshooda.